Iphrofayili yenkampani - U-Huai 'An Hongyu Medical Equipment Co, Ltd.
I-Hongyu Medical yinkampani ekhula ngokushesha ezinikele ekukhiqizweni nasekuthengisweni kwemishini yezokwelapha. Kusukela ngo-2013, inkampani yaseHongyu Medical iye yathuthukisa futhi yakhiqiza izinhlobo ezingaphezu kuka-2 000 zemikhiqizo futhi isungule amaketanga amaningi wokukhiqiza avuthiwe, kufaka phakathi i-ophthalmology, ukuhlinzwa kwepulasitiki, ukuhlinzwa kwe-Micro, i-Neurosurgery, njll, engahlangabezana nezidingo ezahlukahlukene zobudokotela.
Ukuze uphishekele ikhwalithi yokuqala yengilazi, i-Hongyu Medical ihlala ithola izinto zokwakha eziphakeme ezingamelana nokugqwala ngezinsimbi zazo, nge inqubo yokukhiqiza ejwayelekile.Imishini ezenzakalelayo esezingeni eliphakeme iyasiza ukwenza isiqiniseko sokuqonda kanye nekhono lokukhiqiza elizinzile lazo zonke izinsimbi zezokwelapha.Besides, ukwehla kwezinga lokukhiqizwa okungenamsoco ngasikhathi sinye, ukuhlolwa kuhlala kunjalo cishe kuyo yonke inqubo yokukhiqiza kusuka ezintweni kuze kube kuqediwe imikhiqizo.
I-Hongyu Medical ikhwalithi yokulawulaUmnyango umiselwe ukuthi uhlole ngokuqinile ikhwalithi yamathuluzi ngamunye, kufaka phakathi ukubukeka, osayizi, ukunemba, nephakheji. Konke ukuhlolwa kufanele kuhambisane nezwe nezinga elingaphakathi, futhi nesidingo esikhethekile samakhasimende. Ikakhulu ngesidingo esikhethekile sama-oda wamakhasimende, abasebenzi abalawula ikhwalithi bahlala bethatha imininingwane ethe xaxa, ukuze bahlangabezane nezidingo zamakhasimende ngokuphelele.Le ndlela ithuluzi ngalinye elivela eHongyu Medical Design lihlala lilindelwe amakhasimende ethu ngokulawula ikhwalithi ephezulu. kuzobhekwa njengokubaluleke kakhulu kithina, njengomakhi we-OEM / ODM ochwepheshe eChina.
Kuze kube manje, imigqa Yomkhiqizo weHongyu Medical Instruments ibibandakanyeke kumathuluzi we-ophthalmic, amathuluzi okuhlinza epulasitiki, amathuluzi okuhlinza ama-Micro, izinsimbi ze-Neurosurgery, kufaka phakathi i-Orthopedic Scissors, i-Forceps, i-Tweezers, i-Elevator Instruments, i-retractors, isikelo se-Ophthalmic, i-Ophthalmic Forceps, izinaliti zokubamba, kanye neminye imishini ekhethekile, i-ect.
Ukuhlinzeka amakhasimende ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme nezinsizakalo, sesisungule ubudlelwano obuhle bokusebenzisana nabakhiqizi abaziwayo bezimboni yezokwelapha ekhaya nakwamanye amazwe. Lokhu kubambisana okuhlala isikhathi eside nokwenabile kuyasiza ngaso sonke isikhathi emnyangweni wezobuchwepheshe e-Hongyu kungahlala kuthuthukisa amathuluzi afanele odokotela noma izikhungo zezokwelapha ezihlobene.Oma kunjalo, iHongyu Medical ibilokhu igcina inqubo yokuqamba amathuluzi amasha yokwenza amathuluzi amasha okumaketha ngokuya ngezidingo zemakethe .
Le nkampani ayigxili ekwakheni ezobuchwepheshe kuphela, ibambisana nocwaningo lwemitholampilo oluhlukahlukene futhi ithuthukise imikhiqizo enelungelo lobunikazi eyenzelwe odokotela, kodwa futhi isekela ngentshiseko ukuxoxisana ngezifundo zobudokotela okuhlukahlukene, ukuze odokotela abasebasha bakwazi ukuthola uqeqesho lokuhlinza abanolwazi kanye nokuqeqeshwa ngokomqondo, futhi babe nolwazi oluningi odokotela bangaqhubeka nokwenza ngcono. Lokhu ubuhlakani benkampani.
Isizukulwane esincane seHongyu Medical sizoqhubeka nokuhlinzeka ngemikhiqizo engcono nezinsizakalo kodokotela ngokuya nge-tenet yomsunguli.